Kedu otu ezigbo SEO ga-esi enyere m aka?
Achọpụta njikwa nyocha ọchụchọ bụ akụkụ dị mkpa nke mkpọsa SEO ọ bụla. Mgbe a bịara n'ahịa dijitalụ, SEO nyocha bụ ngwá ọrụ zuru oke iji nyochaa njirimara search engine na njikwa gị. Ihe nyocha SEO na-enye nkọwa zuru ezu nke saịtị gị dị ugbu a, si otú ahụ na-enyere aka ịhazi mgbalị SEO gị - sava tyre review.
Ọ bụrụ na ị rụtụbeghị SEO nyocha nke ebe nrụọrụ weebụ gị, wee tinye ya na kalịnda gị n'oge o kwere mee. Ndị nwe ụlọ ọrụ ndị ahụ bụ ndị na-eche banyere azụmahịa ha, ka mma nyochaa otu ugboro na nkeji iri na ise.
SEO Audit: Ihe Ọ Bụ na Olee Otú O Si Arụ Ọrụ?
SEO nyocha bụ ihe niile gbasara ịgbanwe ma wusie ike na ebe nrụọrụ weebụ gị. Dị ka a na-achị, ọ na-ekpuchi ụyọkọ nke mmemme weebụ kachasị njọ, gụnyere:
Peepe na nyocha;
Social media aka;
Nsogbu metụtara ọdịnaya.
Na mgbakwunye na inyere aka ịmata nsogbu, SEO nyocha na-enyekwa aka imepụta ndozi na ịkọwa data anakọtara site na ụlọ ọrụ nchịkọta ọchụchọ dị iche iche.
SEO Audit: Gịnị mere m ji chọọ ya?
Ọ bụrụ na ị na-agba ahịa, mgbe ahụ, ị ​​ga-ama otu esi amata njirimara na adịghị ike nke ebe nrụọrụ weebụ gị. SEO nyocha bụ nhọrọ zuru okè maka ndị na-agbalịsi ike ịghọta ụzọ isi chọpụta ihe ha nwere ike ịnwe na saịtị Google.
Ikekwe ị ghọtara na saịtị gị bụ ọkpụkpụ azụ nke ahịa gị na ahịa gị. Ọ bụ isi ebe ndị ahịa na-aga maka ozi gbasara ọrụ maọbụ ngwaahịa gị. Ọ bụ ebe ha jupụtara ụdị ma mezue zụọ.
Cheta, ọ bụrụ na ịchọtaghị ntanetị gị maka ịchọta engines ịchọpụta na ịkọwa saịtị gị, mgbalị gị fọrọ nke nta ka ọ laa n'iyi. N'okwu dị mfe, ọ bụrụ na ndị ọrụ enweghị ike ịchọta ọdịnaya gị, ha enweghị ike ịmekọrịta gị.
SEO Nyochaa Uru Nrite
Nke a bụ uru atọ kachasị mma nke nyocha SEO ọdịnaya:
Imelite mmekorita akara: na ikike.
Na-amụbawanye mgbalị mgbasa ozi: Na-enyere aka hụ ọdịiche na mgbalị ndị ahịa gị dijitalụ. Ịmara ọnọdụ ahụ ike nke oge a na nsogbu ndị na-egbochi njirimara vidio ahụ bụ uru maka ụlọ ọrụ ọ bụla.
Na-eme ka ikikere nchịkwa saịtị: Na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmụta banyere mpi ha ma chepụta atụmatụ iji melite mgbanwe, ahịa, na ndu.
SEO nyocha bụ ohere pụrụ iche iji bulie ebe nrụọrụ weebụ gị maka engines ọchụchọ ndị bụ isi. Ọ bụkwa ihe ngwọta zuru oke iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke ịzụ ahịa n'ịntanetị gaa na saịtị gị. Nyocha SEO na-enyere ndị nwe ụlọ ahịa aka ịghọtawanye ihe ndị nwere ike imetụta saịtị ha n'ịchọ engine ma chọpụta ma Google nwere ike ịdebanye aka na ibe weebụ.Cheta, SEO nke ọma na-ewe oge na ndidi. Otú ọ dị, akụkọ banyere arụmụka zuru ezu nke azụmahịa ị na-arụ na dijitalụ ị na-enweta na njedebe nwere ike ịbụ naanị ihe ịkwesịrị iji wepụga gị na ọkwa ọzọ.